APA Hotels in Kanazawa, Japan - TripAdvisor
Ausstattung & Service Kostenloses WLAN Inklusive Frühstück Kostenlose Parkplätze Restaurant Bar/Lounge Barrierefreie Zimmer Businesscenter Concierge Fitnessstudio Haustiere erlaubt Internet Klimaanlage Kochnische Nichtraucherhotel Rollstuhlgerecht Spa Suiten Tagungsräume ZimmerserviceBeliebig
Hoteltyp Günstig Mittelklasse Luxuriös Familienfreundlich Business-Hotel Ferienwohnung Hostel Japanisches Gästehaus Onsen Ryokan RomantischBeliebig
“Gute Lage, sehr kleine Zimmer”
“Standard-Business-Hotel mit winzigen Zimmern”
Nr. 10 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 3 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 9 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 4 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 13 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 14 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 1 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 8 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 5 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 7 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 11 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 6 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 12 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 30 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
Nr. 16 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
“Funktionales Hotel für Geschäftsreisende”
Nr. 29 von 109 Hotels/Ryokans in Kanazawa
“einfaches, komfortabeles Hotel”